I-SDDM: Umphathi weSession Lightweight and Beautiful [Ukufaka ku-ArchLinux] | Kusuka kuLinux
I-SDDM (Umphathi Wokubonisa Ideskithophu Elula) njengoba igama lalo lisho ukuthi Umphathi weseshini ukufinyelela ideskithophu yethu esiyithandayo. Kulabo abangazi ukuthi ngikhuluma ngani, iSession Manager yisikrini esivela lapho sivula ikhompyutha bese sisicela igama lomsebenzisi nephasiwedi 😉
Yini ekhethekile mayelana I-SDDM? Kususelwa ku- I-QML ngakho-ke ilula futhi ingenziwa ngezifiso. Ungazuza izingqikithi ezinhle kakhulu, ezinjengalezo eza ngokuzenzakalela futhi okuhle kunakho konke, inokuhlanganiswa okuhle kakhulu ne- KDE.
2 Nika amandla i-SDDM ku-Arch Linux
4 Izindikimba ezitholakalayo
Ngikhumbula ngizama ukuyihlanganisela UDebian Wheezy kepha ibidinga ukuncika kumtapo wezincwadi ophakeme kunalowo ogciniwe.
Uma kukhona umsebenzisi oyifakile kunoma yikuphi okunye ukusatshalaliswa, ngicela ungitshele ngamazwana ukubuyekeza i-athikili bese wengeza ukufakwa kwamanye ama-distros.
Kulokhu, ngiphumelele ukukufaka I-ArchLinux kusuka ku-AUR:
Owokuqala uyasifaka I-SDDM bese kuthi okwesibili, sifake iphakheji ukuze siyihlanganise Izintandokazi Zesistimu de KDE.
Ngaphambi kokufaka noma yini, ngicela ufunde engizokuphawula ngezansi 😉
Ngenxa yemikhawulo ye-ISP yami angikwazi ukusebenzisa itheku engizolisebenzisa IGITHI. Kungakho, ukuze "ngibambe" indawo yokugcina evela eGitHub kufanele ngiguqule:
Lokhu ngikwenza ngoba ngosizo luka Ndodana_Link Bekufanele ngiguqule PKGBUILD futhi ngasizathu simbe lapho wenza lokhu, kunginike iphutha ekufakweni. Konke kwakubonakala kukhombisa ukuthi angizange ngilibhalele leli khosombe GitHub.
Ngemuva kwalokho, ngemuva kokushintsha iskripthi uma ngilanda indawo yokugcina, kepha ayibekanga ifolda lapho iskripthi besiyidinga khona, ngakho yanikeza elinye iphutha. Lokhu ngikulungisile ngokuhambisa ngesandla ifolda.
Kodwa ungesabi, lokhu kwenzeke kimi kuphela. TO Ndodana_Link ngokwesibonelo ifakiwe ngaphandle kwezinkinga, noma-ke yangitshela 😉
Nika amandla i-SDDM ku-Arch Linux
Lapho ukufakwa sekuqediwe ngaqala ukusebenzisa i-SDDM futhi ngafaka esikhundleni se-KDM. Labo bethu abasebenzisa i-Arch Linux bayazi ukuthi ukuqala i-daemon noma insizakalo sisebenzisa umyalo:
Uma sifuna ukukuqala ngaleso sikhathi kuphela:
Yebo, into ejwayelekile bekungaba ukukhubaza i-KDM ngale ndlela elandelayo:
Bese wenza kusebenze i-SDDM:
Kepha ngukuthi i-SDDM ayinginikanga le nketho, ngakho-ke bekufanele ngenze lo msebenzi ngesandla. Ngalokhu siyahamba sihlele ifayela: /etc/systemd/system/display-manager.service.
Leli fayela ngokuzenzakalela lalinakho lokhu:
[Iyunithi] Incazelo = K Isiphathi Sokubonisa Ngemuva = systemd-user-sessions.service [Service] ExecStart = / usr / bin / kdm -nodaemon [Faka] Alias ​​= display-manager.service
Ngakho-ke ngiyisusile ngayishiya kanjena:
[Iyunithi] Incazelo = Isiphathi Sokubonisa Ideskithophu Esilula Ngemuva = systemd-user-sessions.service [Isevisi] ExecStart = / usr / bin / sddm Qalisa kabusha = njalo [Faka] I-Alias ​​= show-manager.service
Ngilondolozile, ngavula kabusha ikhompyutha kanye ne-voila. Kuqale ngokuzenzekelayo I-SDDM esikhundleni I-KDM.
Ukumisa i-SDDM ku-KDE kufanele siye ku Izintandokazi Zesistimu » Isikrini sokungena ngemvume (SDDM) futhi sizothola okuthile okufana nalokhu:
Njengoba ubona singayiguqula ingqikithi ye- I-SDDM futhi ngenhlanhla yethu sinezinketho ezi-4 ezinhle esingakhetha kuzo. Ngezansi kwesokudla kunenkinobho esivumela ukuthi siguqule isithombe sangemuva.
Kuthebhu ethuthukisiwe sithola ezinye izinketho ezithakazelisayo ezifana netimu yesikhombisi esizenzakalelayo noma ithuba lokungena ngemvume ngokuzenzakalela.
Futhi yilokho kuphela abangane abathandekayo. Sivele sinenye indlela esingayisebenzisa njengoMphathi weSeshini. Khumbula ukuthi kunezinye izindlela ezifana ne- I-GDM, I-LightDM, I-KDM, I-XDM, I-SLiM noma ungasebenzisi noma iyiphi i-😛
Nazi ezinye izithombe-skrini zazo zonke ezinye izingqikithi esingazikhetha:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » I-SDDM: Umphathi weSession engasindi futhi omuhle [Ukufaka ku-ArchLinux]
Yebo, abadali beMaui nedeskithophu yabo yaseHawai efana ne-Deepin Desktop QT benze umsebenzi omuhle futhi omuhle, ngendlela yami yokucabanga iMaui +999
Kukhona okushicilelwe kabi, akulona idemoni, kuzoba yi-daemon kunoma yikuphi.
Engxenyeni lapho ithi yenza kusebenze i-ssdm ku-arch 😉
I-Daemon = idemoni ngeSpanishi
Bheka ngokushesha i-exorcist 😀
I-Yoyo ingaba yi-xD ahahaha
Cha Idimoni = idemoni.
I-DAEMON iyi-disk kanye ne-monitor monitor.
Iqiniso lelo! Kepha sekuvele kuyisiko ukutshela amaDemoni: Amademoni 😀
Njengoba i-x11tete11x isho, iDememons ngeSpanishi ibizwa ngeDimoni. Noma kunjalo uma omunye umuntu enginika igama elifanayo engingalisebenzisa, ngiyalishintsha.
Kungenzeka kube igama elifanayo kodwa namanje akulungile .., angiboni ukuthi esiNgisini bababiza ngezinsizakalo.xD
Kuya ngokuthi uyibona kanjani, thina esibe nalokhu isikhashana siyazi ukuthi kuyini, yize kwenzelwa i-systemd, ikubeka njengensizakalo ye-X. Service (clear) ukuyihlukanisa nolunye uhlobo (iyunithi) http://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd.unit.html (.path .mount .socket)
ngokuya nge-wiki (kusuka ku-arch) -> Uma ungacacisi isijobelelo, i-systemctl izothatha insiza. Isibonelo, i-netcfg ne-netcfg.service ziyalingana. (kwamanye amasistimu, njenge-debian, kusacacisa)
Kulungile, ngalokho angisho lutho. Kepha bengisho ukuthi ukwenza insiza isebenze uzofaka i-daemon.service hhayi idemon.service, ungilungise uma nginephutha. Mhlawumbe i-typo ingeyami….
Ngiyabonga kakhulu ngokufaka lo mfana, ngibabona nsuku zonke futhi bangimangaza nakakhulu ...
Wamukelekile. Ngiyajabula ukuthi uyayithanda.
Kubukeka kukuhle ngizozama lapho nje ngiba nesithukuthezi ubuntu bese ngibuyela ku-arch xD
Ngicabanga ukuthi ku-Ubuntu nayo ingafakwa. Kepha angazi noma ngisebenzisa i-PPA noma ngihlanganisa.
kubukeka kukuhle kodwa ngicabanga ukuthi ngizohlala nginciphile
Okokuthandwa kombala .. Kwenzekani ukuthi i-SLiM ikhawulelwe kakhulu ngokwezinketho zokuvala / ukuqala kabusha nokunye.
Ngicabanga ukuthi ukuyifaka kuXfce awudingi i-kcm-sddm-git,
Ucabanga kahle, engicabanga ukuthi kufanele uyilungiselele ngesandla. Anginalwazi.
Ngayifaka ku-debian ngendawo yokugcina izinto, kepha ayiqali i-hehej futhi ngithola umyalezo omncane omuhle ongitshela ukuthi imiyalo ayikho emthethweni,
I-DAEMON: Ukungeza isibonisi esisha «: 0» ku-vt 7
Ukufundiswa okungekho emthethweni
Wuhle kanjena umyalezo onginika wona… Ngabe kukhona umuntu oza nokuthile ???
Lowo mlayezo ufike nakimi, lapha ngithole okuthile ongazama ukukutshela ukuthi kuhambe kanjani 😀
Nayi i-.deb ye-debian ne-derivatives. .. Angikawahloli emthini wami we-linux.
Ngine-archlinux enguqulweni engama-32-bit, futhi ngokusobala iphakethe alikho.
Kufanele uyifake kusuka ku-AUR.
Enye indlela ye-KDM esivele yangicika kancane lol ... ngiyabonga elav; ngendlela lapho usebenzisa i-SLIM ku-LXDE isusa izinketho ukuvala bese uqala kabusha futhi ukuyixazulula kufanele ufake iphakethe elengeziwe. le SM ayenzi okufanayo, akunjalo?
Cha. Ngalokhu ungavala bese uqala kabusha ..
Ukuxolisa, angazi ukuthi kwenzekeni. Wayebhalile
Imifino -Ss ssdm
Ukuhlola iphakethe futhi alizange lingiphonse lutho; kepha manje kubonakala kimi. Kuyamangaza kangazi ukuthi bekungaba yini. Sengizoyifaka, ngiyabonga ngempendulo yakho esheshayo.
Ngokusobala i-sddm iphakathi kwezinketho ezingabhekelwa iMenenja entsha yeSeshini yeKde5. I-Kdm inekhodi eyinkimbinkimbi kakhulu futhi ukushintshela e-wayland kuyinkimbinkimbi kakhulu futhi i-Lightdm inelayisense elingahambelani, ngakho-ke kungenzeka ukuthi i-sddm izoba yi-Session Manager ezenzakalelayo yama-desktops asekelwe ku-qt.
Hhayi, ngeke kube kubi. I-SDDM ayiyinhle nje kuphela, futhi ayisindi futhi ingathatha indawo ye-KDM endala noma, uma yehluleka lokho, ibe nemfoloko yeKDM.
Cha, nakanjani ayikho nge-32-bit.
Ukuhlola i-athikili kagaara, ngixhume kwikhompyutha yomfowethu (archlinux 64 bits) futhi lapho ngibona impendulo ka-elav nginqume ukuyizama futhi (kepha angibonanga ukuthi ayikho kukhompyutha yami). Uxolo kube yiphutha lami.
Ohh, kufanele ngizame lokhu kamuva 🙂
Ngibona abazala baka @ gato noma kungumbono wami?
Ku-fedora ngikhubaza kanjani i-KDM
I-KDM ikhutshaziwe ngomyalo olandelayo:
$ sudo systemctl khubaza kdm.service
Angikukhuthazi ukuyisebenzisa kuFedora KDE, ngoba sengivele ngiyinikile futhi ngaba nezinkinga ezithile ngalokho, lapho ngifaka iphasiwedi lokhu angikaze ngingene ngemvume, bekufanele ngiyidlulisele kokuthi angazi ukuthi ngizokubuyisela ini kuya kokujwayelekile.
Uma ungafuni ukusebenzisa i-KDM, sebenzisa i-LightDM, ngiyayincoma… xD
kungalungiselelwa ukungena ngemvume njengezimpande?
ndoda… sesivele singABABILI abalindele impendulo evela ku-ELAV !!!
Mhlawumbe uma ushintsha izinketho zakho ngesandla ..
Kubukeka kumnandi! Siyabonga ngokusiphathela izindaba. Ngizozama
Kuhle, futhi kusezinqolobaneni zeFedora.
Esimweni sami ngiyifakile ngalandela izinyathelo ezichazwe ngenhla, kepha angikwazi ukuqala i-KDE, ihlala i-Sddm, ngakho-ke okwamanje ngibuyela ku-KDM ukuqhubeka nokusebenzisa ikhompyutha
Sawubona! Ingabe ikhona indlela efanayo yokuyenza kuFedora 19?
Faka i-SDDM kepha angiluboni ushintsho
Kungani ungafaki impahla ye-target = »_ blank» kuzixhumanisi zezithombe, ukuze ivule kwenye ithebhu hhayi kuleyo efanayo.
Uyazi ukuthi ungazifinyelela kanjani izilungiselelo ku-xfce4?
UDante linares kusho
Angikwazanga ukuyifaka kanye noMate, ngabe kufanele ngabe yi-KDE?
Phendula uDante Linares
Ngifuna ukufaka into enjengale yaaaaa /> w <) / Ngisebenzisa i-fedora ngizokushiya i-facebook yami uma ufuna ukungisiza https://www.facebook.com/profile.php?id=100006796098740
URodrigo Orrego kusho
Ngicabanga ukuthi kufanele usho endatshaneni ukuthi uma usebenzisa i-Arch noma uhlelo olususelwe, ungafaka izingqikithi eziningi ezivela ku-AUR, bheka ngincamathisele lesi sithombe ozosisebenzisa uma ufuna:
Phendula uRodrigo Orrego
Ukuthayipha ngesoftware yamahhala